Sneak Peek @ Canon 5D Mark III | My Burmese Blog
Sneak Peek @ Canon 5D Mark III	On February 3, 2012	by Htoo Tay Zar	With	5 Comments	- Camera	ဒီရက်ပိုင်းမှာ CNet, Forbes တွေမှာတက်ခဲ့တဲ့ Canon ရဲ့ 5D Mark III prototype ပုံကိုကြည့်ပြီး သရေကျနေမိတယ်။ လက်ရှိနောက်ဆုံး 5D Mark II full frame dslr က ထုတ်ခဲ့တာတော်တော်ကြာနေပြီ။ ပြီးအမှန်အတိုင်းပြောတာ ကျွန်တော် 550D လောက်ကိုမကြိုက်တာ 5D ကော 5D mark II ကောပဲ အဆိုးဆုံးကတော့ shutter သံက အစနားထောင်လို့မကြိုက်ဘူး။ လက်ရှိမှာ ဒင်းက full frame ဆိုတာလေးနဲ့ အသက်ဆက်နေတာ auto focus point ကလဲ ၉ ပွိုင့်ပဲပါတယ် photojournalism မှာ အရေးပါတဲ့ fps ကလဲ မကောင်းဘူး။ ဆိုးတာက ဘော်ဒီဒီဇိုင်းက သိပ် လေးထောင့်ကျလွန်းတယ် လက်ထဲမှာ ကိုင်ဖို့ အချိုင့်မပါတဲ့ မျက်နှာပြင်ကြီးကို ညှပ်ပြီးကိုင်ရတဲ့ အတွက် အားစိုက်ရတယ်။ နောက် ဗီဒီယို ရိုက်ရင် 1080P တူတူပဲဆိုပေမယ့် သူ့မှာ ဗီဒီယိုအတွက် သီးသန့် ခလုတ်မပါဘူး။ ပြောရရင်တော်တော် ဒိတ်အောက်နေပြီပေါ့။ လက်ရှိတော့ 7D ကို အကြိုက်ဆုံးပဲ သူ့မှာ APSC ဖြစ်နေတော့ 1.6X crop factor မြောက်တာ ရှိနေတာလေးပဲပြောစရာရှိတယ်။ ခန့်မှန်းထားတာလဲ တကယ်တမ်း 5D mark III ဟာ 7D ကို full frame sensor ပြောင်းသွားတာဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ အရင်ကတည်းက မှန်းထားတာ။ ထင်တဲ့အတိုင်းပဲ prototype design က 7D နဲ့ သားအဖ လိုတူတယ်။ အဲဒီကင်မရာကို ဂျပန်နိုင်ငံသားတစ်ယောက်က ကင်ညာမှာ ဓာတ်ပုံရိုက်နေတာကို အခြား ဓာတ်ပုံဆရာတစ်ယောက်က မမြင်ဖူးတဲ့ မော်ဒယ်မို့ ဓာတ်ပုံရိုက်ထားတာပါ။ သူမေးတော့ အဲဒီဂျပန်က သူက Canon မှာ လုပ်တယ်ဆိုတာကလွဲပြီး အင်္ဂလိပ်လို ကောင်းကောင်းမပြောတတ်ဖူးဆိုပါတယ်။ အသစ်ဆိုတော့ ဖြစ်နိုင်ခြေက 5D Mark III လား ဒါမှမဟုတ် 7D Mark II လားပေါ့။ တကယ်တမ်းသေချာ ကြည့်ရင် 5D Mark III ဖြစ်နိုင်ခြေပိုများပါတယ် ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကင်မရာခေါင်းမှာ pop up flash မပါတာကို သိသိသာသာကြီးတွေ့ရမယ်။ flash မပါဘူးဆိုကတည်းက viewfinder အပေါက်မှန်ကြီးပြီး full frame ကင်မရာဖြစ်နေတာ သေချာပါတယ်။ ကင်မရာရဲ့ ခလုတ်နေရာတွေက 7D နဲ့ တစ်ထပ်ပါပဲ။ ကြည့်ရတာ button layout ပုံသေထားတော့မယ်ပုံပဲ Canon ကင်မရာတွေမှာ ဆိုးတာတစ်ခုက ကင်မရာခလုတ်တွေ နေရာအရင်ကမမှန်ဘူး မော်ဒယ်တစ်ခုကို တစ်မျိုးပြောင်းနေတာ အခုတော့ ငြိမ်သွားပုံပဲ။ နောက် သတိထားမိတာက dial mode အလယ်မှာ lock ပါလာတာတွေ့တယ်။ အဲဒီ lock က 60D မှာပဲပါခဲ့တာ dial လှည့်ချင်ရင် သူ့ကို ဖိပြီးလှည့်မှ လည်တယ်။ နောက်တစ်ခု ထူးခြားတာက battery grip မှာ joystick လေးပါလာတယ်။ အရင် ကင်မရာ grip တွေမှာ အဲဒါမပါတော့ အတော်ဒုတ်ခရောက်တယ် ဒေါင်လိုက်ရိုက်ရင်းနဲ့ auto focus point အမြန်ပြောင်းရမယ်ဆိုရင် ကွိုင်တက်ရော ချောင်းကြည့်ပေါက်ကနေ မျက်လုံးကို နဲနဲလေးခွာလိုက်ပြီး လက်ချောင်းအပေါ်ရွေ့ပြီး အဆင်မပြေပြန်လှည့်ရတယ်။ အဲဒါလေးတွေက စက္ကန့်ပိုင်းလောက်သာကြာတယ်ဆိုပေမယ့် သတင်းဓာတ်ပုံလို ဖန်တီးယူရတာမဟုတ်တဲ့ လျှပ်တစ်ပြတ်ရိုက်ရပြီဆို ခက်တယ်။ အခုတော့ အဆင်ပြေသွားတာပေါ့။ ကောလဟာလကြားရသလောက်တော့ 5D Mark III က 22MP နဲ့ 6.7 fps ရှိမယ်ဆိုပါတယ်။ 7D ရဲ့ 8 fps ကို မမှီပေမယ့် full frame starter မှာ အဲဒီလို စပိရမယ်ဆိုရင် ဂွတ်ပြီပေါ့။ Auto focus point က အနည်းဆုံး ၂၀ အထက်မှာရှိမယ်ထင်ပါတယ်။ ထွက်လာရင်တော့ ပိုက်ဆံချေးပြီးဝယ်ဖို့ စိတ်ကူးထားတယ်။ စျေးကတော့ ဖြစ်နိုင်ချေရှိတာ 2500 (body only) ဝန်းကျင်လောက်ဖြစ်လိမ့်မယ် ထင်ပါတယ်။ Camera	5 Comments	Black Dream
ready to buy Like or Dislike:00	Htoo Tay Zar
Cool bro, let me test bro if you bough one when it’s out. =D
Like or Dislike: 1 0	Ko Paing
CanonRumors posted them as 5D X & 5D Mark III and both prices are over $3K . BTW, it’s good for people on tight budget like me. Now Canon gave nice promotion on 7D which cost only S$1980 for body and even can get EF50mm/1.8 II and miniature camera as free gifts . Yesterday I’ve sold out my old body and went for it.
Like or Dislike:00	ငနုချောင်းသား
ဘားလေး ဘာလေး ကမ့်ပါဦးခင်ဗျ။ ကိုယ်နားမလယ်တဲ့ ကင်မရာအကြောင်း လာလာဖတ်နေတာ ဆယ်ရက်အတွင်း သုံးခေါက်ပေါက်ပေါ့။
ဆောရီဗျာ စာဆိုတာကလည်း သွားတိုက်ဆေးဘူးလို ညှစ်တိုင်း မထွက်လောက်ဘူးနော။
@Ko Paing ~ I heard about that too bro, it would be around 3000$ my friend who working at Canon office told me too. I wish I can own it since 5D mark ii is already too old. Yes bro 7D is nice camera indeed. Thanks for comment… Like or Dislike:00	LeaveaReply Cancel reply